खै छुट्टाउनै सकिएन। बनेपा तिरको सिलिकन भ्याली त हैन हा हा।। तर जे होस साह्रै सानदार रहेछ है। यसको बारेमा अर्को पोष्ट पनि राखिदिनु होला है।
If I'm not wrong, this isapolytechnic institute of Banepa, Kavre. Its justaguess, I've never been there...I've just seen that polytechnic institute from my University :D
पनौती तिर होला..:)
"दिन बुढाको अफिसियल र आफ्नो" भनेर आफ्नो र बुढाको एकसाथ परिचय त दिन खोजे पनि ठेगाना अलि गडबडी भएछः http://http/dacharya.blogspot.com । चित्रहरू सुन्दर लाग्यो। निकै खर्च गरेर बनाएको सम्रचना हो जस्तो छ। जनताको रकम हो कि कस्को हो। अस्पलात अचाल शिक्षण अस्पताल भन्दछन कि क्या हो जस्तो छ प्रयोगशाला पनि रहेछ। खै पत्ता लाउनै सकिएन नि!
म पनि बेखबर नै रहे यो ठाउँवाट तर निकै मनोरम र सुन्दर दृश्यहरु रहेछन। उदेक लाग्दो त खासै केहि भएजस्तो लागेन । मान्छेको चहलपहल चाहि देखिदैन कतै बिदा परेर हो कि ?
रुक्मागत जी, लिन्क राख्दा गल्ती भएको रहेछ,औंल्याईदिनु भएकोमा धन्यवाद । अहिले सच्याएकी छु ।
यो संरचनाको वारेमा उदेक लाग्ने कुरा भने अनुमान लगाउँदै गर्नुहोला :) (पछि लेख्नेछु )
कृष्ण पौडेल said...
काठमाण्डु युनिभर्सिटी पो हो कि , बनेपातिर ।
कमेन्टको लागि सबैमा धन्यवाद । ठाउँ भने आकारजीले सुरुमै मिलाउनु भएकोले भनिरहनु नपर्ला । (हामीले पनि त्यहाँबाट तपाईँको युनिभरसिटि देखेका थियौं :)
उदेक लाग्ने कुरा भने यो हाम्रो सरकारले चिनियाँ सरकारलाई अनुरोध गरेर बनाइएको रहेछ (चिनियाँ सरकारको सहयोगमा) । तर हाम्रा संस्थानहरूलाई लाग्ने खालको रोग लागेको ले निर्माण पुरा भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कक्षाहरू सुरु हुन सकेको रहेन छ ।
१२०० विद्यार्थीको क्षमता भएको यो शिक्षालयमा हाल सिटिईभिटिको कम्प्युटर क्लासमा जम्मा २०-३० जना मात्रै पढ्ने रहेछन् । यत्रो लगानी र यो संरचना यसरी खेर गएको देख्दा उदेक लागेको हो ।
राजेश नतांश said...
मलाई नी अचम्म लाग्यो यसअघि कहिल्यै देखेको थिइन ।
धन्न एकथरी मान्छेको आँखा परेको रहेनछ, नत्र तिनले त्यहीं क्याम्प खडा गर्थे | यति राम्रो सुबिधाको प्रयोग गर्न कुन दुविधाले रोकेको होला सरकारलाई ?
अचम्मै रहेछ वा‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ तर साच्चै हाम्रा देशमा यस्तै अचम्महरु धेरै छन कतै बिधार्थी थेग्न नसकेर बिजोग कतै बिधार्थी नपुगेर भवनको बिजोग ।
this building is very nice